BestCities: Bogotá nhume kuti vagamuchire 'Simba revanhu'
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » BestCities: Bogotá nhume kuti vagamuchire 'Simba revanhu'
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Colombia Breaking News • tsika nemagariro • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Dai 15, 2018
Masangano kubva kumatunhu epasirese ari kuzoburukira kuBototá, Colombia, muna Zvita uno, kwevhiki rekukurudzira maspika, mashopu anokurudzira kufunga uye kutenderera nhete dzakakomberedza dingindira reSimba reVanhu pagore reGoodCities Global foramu. Kurwira kuwana 100% yekubudirira chiyero kubva kune vamiriri kwegore rechitatu richimhanya, chirongwa cheMusangano we2018 chakazara nemabasa anozovandudza hunyanzvi hwevatariri vemubatanidzwa.
Rondedzero yezvaunotarisira kubva kuForamu yegore rino yaburitswa mangwanani ano pakudya kwemangwanani kwekudyidzana kwakaitirwa neBestCities panguva yeIMEX Frankfurt Yakaitwa pamwe nekubatana neGreater Bogotá Convention Bureau (GBCB), dingindira regore rino rinotarisana neThe Power of People. Kubatsira kufambisa vanhu kuti vaite zvakawanda, Simba reVanhu mushandirapamwe unotaura nezve kugona kwevanhu kuita shanduko zvisinei nezvavanogara.
Panguva iyo nyaya dzezvematongerwo enyika kana miganho yechitendero inogona kuumba zvipingaidzo zvekugovana ruzivo nekubatana, bhizimusi rezviitiko zvebhizinesi harina kumbove nebasa rakakosha. BestCities inotarisa kugadzirisa izvi nekuunza pamwe chete gumi nemaviri maguta ekubatirana kubva pasirese pasirese ayo anosimudzira iyo yepamusoro nhanho yemipimo yemisangano uye zviitiko. Inovakurudzira kuti vatarise kunze kwekushanya uye vasiye nhaka dzisingaperi. Nokubata Global Forum yegore negore inotanga kudzidzisa vakuru vakuru vesangano pamusoro pekukosha kwemisoro iyi ichiratidzawo gumi nemaviri epamusoro ekirasi nzvimbo. Iyo Power of People chirongwa ichavavarira kugadzirisa nyaya idzi, kuunza nhaurirano dzinofambira mberi uye kufambisira mberi chikonzero chemisangano yepasi rose.
Foramu yegore rino ichaona huwandu hunoshamisa hwevatauri kusanganisira
• Rick Antonson "netsaona Executive" uye aimbova CEO we Tourism Vancouver. Mushure mekufamba pasirese, akanyorwa mabhuku mashanu uye akaridza chikamu chake mune zvimwe zvinozivikanwa zvakanyanya muCanada, Rick achaunza nzira yake zvishoma zvakateerwa zviitiko kuchirongwa ichi achikurukura nguva yake ku Tourism Vancouver.
Lina Tangarife, Director weSocial Responsibility kuSocial Alliance yeUniandinos. Nyanzvi mune zvine hungwaru manejimendi emaCivil Society Organisation, akashandisa simba revanhu nekusimbisa vanozvipira mukati memakambani, hurumende nemasangano asiri ehurumende.
• Neyder Culchac, Mutungamiriri wechidiki. Kubva kunharaunda inonzi Putumayo kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweColumbia, Neyder akakura akakomberedzwa nemakakatanwa asi aive akatsunga kurega izvi zvichimubata kubva pakuita shanduko yakanaka. Kugadzira chirongwa chakashandura hupenyu hwemhuri mazana mana nemakumi masere mukati menzanga yake, Neyder achagovana nyaya yake yehupenyu uye kudzidzisa vamiriri pasimba rekusarudza.
Kudzokera kwegore rechipiri, Sean Blair, muridzi weProMeet, achabatsira musangano wegore rino. Yakaitirwa kuAgora Bogotá Convention Center, mamaira maviri kubva kunhoroondo yenhoroondo yeBogotá, foramu yemazuva mana inosanganisira hurukuro dzehurukuro, misangano yekudyidzana uye chirongwa chetsika chekudzidza nezvenharaunda netsika dzeLatin America.
Segore rapfuura, vamiririri vanoenda kuMumiriri weDinner kuti vasangane nevezera ravo, vamiriri venzvimbo uye vanobatana navo vanovapa mukana wekuvaka hukama uye kukura samambure avo pasirese. Misangano yakakurumbira yeCity Café uye mukana wekushamwaridzana pasocial network unodzoka zvakare nevose gumi nevaviri vevakabatana veBestCities varipo (Berlin, Bogotá, Cape Town, Copenhagen, Dubai, Edinburgh, Houston, Madrid, Melbourne, Singapore, Tokyo neVancouver).
Paul Vallee, Managing Director weBestCities Global Alliance akati: “Nechirongwa chinogara chichiyevedza chedzidzo, njere nekubatika, wechitatu BestCities Global Forum ichapa nhume nzwisiso yakadzama pamusoro pemisangano yemagetsi nemisangano inofanirwa kugadzira shanduko kuburikidza nevanhu, uye mukana wekugadzira nhaka dzisingaperi. Iri kuumbika kumusoro kuti ive yechiitiko chakasarudzika chine huwandu hwakakura hwevatauri, mashopu uye zvikamu zve network.
“Tinoshanda muindasitiri umo vanhu vari pamoyo wechokwadi chese chatinoita. Dingindira rePower of the People uye mushandirapamwe uyu uchashanda kuratidza vanhu vazhinji vanokurudzira avo vari kushanda kunatsa indasitiri uye kugadzira nhaka dzisingaperi.
“Wese munhu anofara zvikuru kuenda kuguta guru reLatin America kuGlobal Forum yegore rino. Bogotá ndiyo yega nzvimbo yekuenda kuLatin America kuGlobal Forum saka ichave izere nezviitiko zvitsva zvetsika kuti munhu wese afarire. Vanhu vanoita guta iri uye saka ndiyo nzvimbo yakakwana yekugamuchira dingindira regore rino. "Ndinokurudzira vese vamiririri vanosangana nezvinodiwa kuti vanyorese kuti vapinde nguva isati yakwana."
Jorge Mario Díaz weGreater Bogotá Convention Bureau akati: “Guta rese rakabvumidzwa kuita Global Forum yegore rino. Wese munhu ari mubishi kugadzirira nekuisa zvese zvavanogona kuseri kwayo kuti foramu iyi isangokanganwika uye yekudzidzisa chete asiwo kuratidzira Simba Revanhu venhengo dzeAlliance.
“Ndiri kufara nekuunza musangano uno mukurumbira kuguta redu, uye nekukwanisa kugovana vanhu vanoshamisa netsika dzeLatin America neavo vanopinda.
Kwegore rekutanga, dingindira reGlobal Forum rakagovaniswa kuburikidza nedhijitari mushandirapamwe unotungamirwa neGBCB. Mushandirapamwe uyu wakanangana nekupa kunzwisisa chaiko uye zvinoreva kuti Simba reVanhu rine mukati meindasitiri iyo inokwanisa kuita shanduko. "Vose gumi nevaviri vanobatana neBestCities Global Alliance varatidza kutsigira mushandirapamwe uyu."
Kwegore rekutanga, dingindira reGlobal Forum rakagovaniswa kuburikidza nedhijitari mushandirapamwe unotungamirwa neGBCB. Mushandirapamwe uyu wakanangana nekupa kunzwisisa chaiko uye zvinoreva kune vane simba vanhu mukati meindasitiri iyo inokwanisa kuita shanduko. Vese gumi nevaviri vanobatana neBestCities Global Alliance vakaratidza kutsigira kwavo kumushandirapamwe.
Kunyoresa kwe BestCities Global Foramu Bogotá ikozvino yakavhurwa. Mahara kuenda, nendege-dzinoenda nendege, pekugara uye chikafu kune vese vanopinda vanokwanisa vemunyika vatungamiriri vakafukidzwa neBestCities.